परिवार दोस्रो बच्चा आउँदा आमाबाबुले acutely प्रश्न reshuffle खडा, र संभवतः नर्सरी नया स्वरूप। बच्चाहरु चाँडै अप बढ्न। चाँडै वर्तमान एक नवजात आफ्नो भाइ वा बहिनी गर्न कोठा मा उत्प्रेरित गर्नेछ।
युवा आमाबाबुले 10-11 देखि वर्षको फरक sexes को बच्चाहरु बसोबास गर्न भनेर थाहा हुनुपर्छ। यो विभाजन गरेर कोठा विभाजन गर्न सम्भव पनि छ। तपाईं फर्नीचर प्रयोग गरेर कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पूर्ण ठाउँ zoned गर्न सक्नुहुन्छ।
दुई छोराछोरीको लागि बच्चाहरु फर्निचर विशेष, धेरै होसियार तपाईँले किन्न छ कि ओछ्यानमा सहित सबै गर्न दृष्टिकोण आवश्यक छ। यो महत्त्वपूर्ण छ मात्र आफ्नो गुणस्तर, आफ्नो निर्माण प्रयोग सामाग्री, तर पनि कोठा को सही स्थानमा।
कोठा धेरै सानो छैन भने, यो तिनीहरूले एक अन्तरिक्ष खेल फारम भनेर यस्तो तरिकाले तिनीहरूलाई व्यवस्था, दुई साधारण बेड किन्न सिफारिस गरिएको छ। यस मामला मा, छोराछोरीलाई पूर्ण बराबर footing मा हुन र एउटै व्यक्तिगत स्पेस हुनेछ।
दुई छोराछोरीलाई लागि अपार्टमेन्ट सानो बच्चाको फर्नीचर थप कठिनाइ सिर्जना गर्छ। अक्सर यस्तो अवस्थामा, प्रयोग बंक बेड ठाउँ सुरक्षित गर्न। यो समाधान यसको pluses र minuses छ। यसलाई ध्यान दिएर विशेषताहरु र छोराछोरीको व्यक्तित्व विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। एकदम अक्सर एक बच्चा, तल्लो स्तरमा "बन्दोबस्त", उहाँले slighted महसुस।
अब दुई छोराछोरीको लागि छोराछोरीको फर्नीचर छोराछोरीलाई माया जो धेरै रोचक मोडेल, replenished। हामी ओछ्यानमा-मचान बारेमा कुरा गर्दै छन्। तर तपाईं एक समान मोडेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, दोस्रो ओछ्यानमा लम्ब बच्चा ठाउँ अभाव र उल्लङ्घन एक प्रकारको को भावना प्राप्त गर्दैन राखिएको हुनुपर्छ पहिलो टियर मा।
एउटा सानो उमेर फरक बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प दुई मचान बेड को खरीद हुन सक्छ। छोराछोरीलाई उमेर र आत्मा मा नजिक छन् भने, तिनीहरू यो विकल्प प्रेम हुनेछ।
अक्सर, दुई छोराछोरीको लागि छोराछोरीको फर्नीचर क्षेत्र द्वारा वितरित। का सबै भन्दा राम्रो यो मामला मा के फर्नीचर आवश्यक हुनेछ गर्न कसरी हेरौं। पहिलो, कार्य क्षेत्र, जहाँ बच्चाहरु मा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ सुसज्जित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो क्षेत्र केटाहरू र बालिका लागि एउटै हो। यो सामान्यतया झ्याल नजिकै स्थित छ। क्षेत्र आवश्यक तालिका र कुर्सी (समायोज्य उचाइ एक कुर्सी थियो प्राथमिकताको गर्न) समावेश गर्नुपर्छ। आज, एक विशाल श्रेणी मा प्रस्तुत दुई को लागि छोराछोरीको फर्नीचर को सैलून मा। यो बच्चाहरु को उमेर मा आधारित सही छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
कम आफ्नो छोराछोरी, अधिक उनि प्ले गर्न, कोठा एक दराज वा हुनुपर्छ त आवश्यक खिलौने लागि दराज को छाती, र बालिका गुडिया खेल्न तालिका आवश्यक छ।
आमाबाबुले छोराछोरीको फर्नीचर ठोस काठ बनेको पर्यावरण-अनुकूल छ भन्ने जान्नु आवश्यक छ। यसलाई आफ्नो बच्चाको एलर्जी प्रतिक्रिया कारण छैन। छोराछोरीको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न - छोराछोरीको फर्नीचर को उत्पादन मुख्य माग गर्न subordinated छ। chipboard प्रयोग छोराछोरीको फर्नीचर को निर्माण मा ठोस काठ बाहेक। MDF को टास्ने राल को आवेदन को विवाद छ किनभने किनभने यो पारिस्थितिकी सामाग्री, धेरै विरलै प्रयोग गरिन्छ।
र के को लागि, वास्तव मा, एक कम्प्यूटर डेस्क चाहिन्छ?
स्कूल को विद्यार्थी लागि समतल आरामदायक डेस्क
हाडजोर्नी गद्दा संग सोफा-बिस्तर - आफ्नो घर को लागि एक स्टाइलिश र सहज फर्नीचर
सर्वश्रेष्ठ परिवार कमेडी: शीर्ष 5
अनुमोदन - सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव गुण हो
को किंडरगार्टन मा एक क्रिसमस पार्टी कसरी सञ्चालन गर्ने?
राम्रो तरिकाले देखि र फलाम sulfide पानी फिल्टर
कटाई Shchavlev को जाडो। भविष्यको लागि भण्डारण जडीबुटी
"Futsikort": निर्देश पुस्तिका, समीक्षा, फोटो, एनालग
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को कवि
नौकर गर्ने हो? विवरण र फोटो चलचित्र नायक
मान्छे को गुणस्तर परिस्थिति र मन को राशि निर्भर
फ्राइङ प्यानमा हट स्यान्डविच: विभिन्न खाना पकाउने विकल्पहरू
कम्प्यूटरमा आफैं भागमा कसरी इकट्ठा गर्ने